February 21, 2021 - Padaethar
February 21, 2021 by Padaethar
ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးရှေ့ ရောက်တဲ့ အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အတူရှိနေချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် မထင်မှတ်ပဲ ပြုမူလိုက်တဲ့ ကိုယ့်လှုပ်ရှားမှု အပြုအမူတွေကြောင့် တစ်ဖက်လူမှာ စိတ်လှုပ်ရှားသွားရတာမျိုး၊ ရင်ခုန်သွားရတာမျိုးတွေ ရှိတတ် ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်ဘက်က စနစ်တကျ လုပ်ဆောင် လိုက်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ လုပ်ဆောင်ပြုမူ ပုံလေးတွေက ကိုယ့်ကောင်လေးကို ဆွဲဆောင် လိုက်နိုင် တာမျိုးပေါ့။ အဲ့ဒီလို ဆက်စီကျတဲ့ လုပ်ရပ်လေးတွေ ကတော့ ၁။ အားလပ်ရက် အတူရှိနေချိန်၊ အပန်းဖြေ ခရီးအတူ သွားချိန်မှာ အဖြူရောင်ရှပ် အကျီ ပွပွကြီး ဝတ်နေတာမျိုး ။ အထူးတလည် ရွေးချယ် ထားတဲ့ အနက်ရောင် ဂါဝန်က အမျိုးသားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်သလား ဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ အဲ့ဒီထက် သေချာတာ ကတော့ … Read more
1980 မှ 1995ခုနှစ်ကြားထဲမှာမွေးတဲ့ အဖြူရောင် မြက်ခင်းစိမ်းတွေဆီက အသံ
အဖြူရောင် မြက်ခင်းစိမ်းတွေဆီက အသံ 1980 မှ 1995ခုနှစ်ကြားထဲမှာမွေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေများရှိရင် ခဏလောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါလား… ခဏလောက်လွမ်းရတာပေါ့ 2000 ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ကျွန်တော်တို့ လို 1990 နှစ်ကာလအနီးတစ်ဝိုက်မှာ မွေးခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်တော့အရာရာထက်ပိုလွမ်းရတဲ့နှစ်ကာလတွေပါပဲ။ အထူးသဖြင့် မြို့ ကြီးပြကြီးတွေထက် နယ်မြို့ သေးသေးလေးဆီမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရသူတွေအတွက်လွမ်းရတဲ့ရနံ့ က ပိုပေါနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းက နွေဟာနေလိုမပူသေးပဲ ဆောင်းဟာနှင်းတွေနဲ့ လင်းပွင့်နေတုန်းပါပဲ။ ညနေကျောင်းဆင်းတဲ့အခါ ဘောလုံးကန်ကြတဲ့လူငယ် တွေလိုတာထက်ပိုများနေကြပြီး ကျူရှင်ချိန်တွေကလည်း အခုလောက်မပိသေးတဲ့နှစ်ကာလတွေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ခေတ်ပေါင်းများစွာကို ငြင်းခုန်ရင်းသတ်ပုတ်ရင်း စည်းလုံးရင်း ဟိုဘက်ရက်ကွက် ဒီဘက်ရက်ကွက်တွေ အားကစားတစ်ခုခုချိန်းကန်ရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတယ်။ လိပ်ပြာတွေ ပုစဉ်းရင်ကွဲတွေတအားဖြတ်ပျံနေတဲ့ကာလဆို ကုတင်အောက်ကဖုန်တက်နေတဲ့ရစ်လုံးတွေထုတ်ကြမယ်။ဆီစိမ်စက္ကူနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ခုတ်စွန်တွေ ကျန်ကျောင်းပုံပါတဲ့ အမြီးဖွါးဖွါးနဲ့ ကလေးတွေလွှတ်တဲ့အပျော်တမ်းစွန်တွေ…. မှန်စာတွေသူ့ ထက်ငါအပြိုင်တိုက်ရင်း စွန်ခေတ်ဆိုတာကိုဖြတ်သန်းကြမယ်။သားရေပင်တွေကို သားရေပင်ဂိုင်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်တာဖြစ်ဖြစ် ဒိုးပြားတွေနဲ … Read more
ကိုယ် တန်ဖိုးထားသူကို မဆုံးရှုံးချင်ရင်…
ကိုယ် တန်ဖိုးထားသူကို မဆုံးရှုံးချင်ရင် လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ယုံကြည်မှု မရှိရင် ဝေးသွားမှာပဲ ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်လောက် နားလည် နားလည်လေးစားမှု မရှိရင် နားလည်မှု ပြိုကွဲမှာပဲ ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘယ်လောက်ပဲ လက်တွဲခဲ့ ပွင့်လင်းမှု မရှိခဲ့ရင် ကြိတ်လုံးတွေ ထပေါက်ကွဲ မှာပဲ ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ် လောက်ပဲ သံယောဇဉ် ကြိုး ခိုင်မာပါတယ် ပြောပြော သံသယ စိတ်ဝင် လာရင် အနေ နီးပေမယ့် ရင်ခုန်သံတွေ ဝေးကွာ နေရ အုံးမှာပဲ ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ပဲ မေတ္တာတွေ နက်ရှိုင်း ခဲ့ပါစေ အချင်းချင်း … Read more
ချစ်သူ ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အဆင့်မှာလဲ? ချစ်သူတိုင်းဖတ်ကြည့်သင့်တဲ့စာလေးပါ။
ချစ်သူ တွေ ကျော်ဖြတ်ရတဲ့အဆင့် ၇ဆင့်ရှိသတဲ့ ဖတ်မိတာတော်တော်သဘောကျလို့သူငယ်ချင်းလည်းဖတ်ရအောင်ဝေမျှတယ်တိုက်ကြည့်ရအောင်နော် #်အဆင့် ၁။ အရူးအမူးဖြစ်ကြတဲ့ အဆင့် ဒါကတော့ ချစ်သူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ ပထမဦးဆုံး အဆင့်ပါ။ ဒီအဆင့်မှာ ချစ်သူတွေဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရမ်းဆွဲဆောင်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အပြစ်မမြင်ကြဘဲ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ကောင်းကွက်တွေပဲ ကွက်မြင်ကြတဲ့ အဆင့်ပေါ့။ # အဆင့် ၂။ နားလည်မှုရလာတဲ့ အဆင့် ဒီအဆင့်မှာတော့ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ပိုသိလာကြပြီ။ ညဘက်တွေဆို ချစ်သူနဲ့ ဖုန်းတွေအကြာကြီးပြောမယ်။ မိသားစုအကြောင်းတွေ၊ ရည်းစားဟောင်းအကြောင်းတွေ၊ လျို့ဝှက်ချက်တွေ အကုန်ပြောမယ်။ ပြီးရင် ချစ်သူဆီကလာတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတိုင်းကကိုယ့်အတွက် ချိုမြိန်နေမယ်။ ပျော်ရွင်စရာအချိန်လေးတွေပေါ့။ # အဆင့် ၃။ အနှောင့်အယှက်ဝင်တဲ့ အဆင့် ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ပြသနာလေးတွေနည်းနည်းစလာပြီ။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပထမဦးဆုံး ရန်စဖြစ်ကြတဲ့အချိန်လေးတို့၊ စကားများပြီး … Read more
ယောက်ျားစစ်စစ်တွေလို့ သုံးလိုက်လို့ စိတ်မရှိစေချင်ဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် အခုခေတ်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အပေါ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူနဲ့မထိုက်တန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ လုပ်လုပ်သွားကြလို့ သူတို့တစ်တွေနဲ့ ကွဲပြားသွားအောင် ယောက်ျားကောင်း လို့ သုံးလိုက်ရတာပါ။ ဒါဖြင့် အမျိုးသမီးတွေကကော ယောက်ျားတွေကို နောက်ကောက်ချမသွားဘူးလား … မေးစရာရှိပါတယ် …. အဲဒါကိုလည်း ဒီနေရာကနေ ပြစ်တင်ရှုံ့ချလိုက်ပါတယ်။ သစ္စာရှိရှိ ချစ်သူတွေပေါများပါစေ … လက်တွဲခိုင်မာတဲ့ ချစ်သူတွေ ပေါများပါစေ ဆုတောင်းပေးရင် ကျွန်တော်နဲ့ ဘ၀တူအမျိုးသားတွေယောက်ျားစစ်စစ်တွေ အဖြစ် ဂုဏ်ယူကြမယ်ဗျာ။ ချစ်သူအမျိုးသားတွေဟာ ကိုယ့်ချစ်သူကို တစ်ကယ်ချစ်ရင် အောက်ပါအချက်တွေ မလွဲမသွေလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတာ လက်ဆောင်ပါးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ချစ်သူကို ချစ်ခင်လေးစားမှုအပြည့်အ၀ပေးတယ် ချစ်သူဟာ ဘယ်လောက်နိမ့်ကျနေပါစေ တကယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်တော့မှ ချစ်သူအပေါ် လက်လွတ်စပယ် မဆက်ဆံပါဘူး။ ယုတ်စွအဆုံး ချစ်သူဟာ အပျော်မယ်ဖြစ်နေရင်တောင် … Read more
သင့်ဖူးစာရှင်ကို တွေ့တဲ့အခါ သင်ခံစားရမယ့်အရာ(၄)ခု
အချစ်ကို ခံစားရတဲ့သူတိုင်းကဗျာရေးတတ်လာတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ တကယ်တော့ ကဗျာတင်မဟုတ်ပါဘူး နှလုံးသားက ပူးနွေးလှုပ်ရှားလာပြီး ခံစားတတ်လာတဲ့အခါ သိမြင်ခံစားရတဲ့အရာအားလုံးဟာ ၀တ္ထု၊ ကဗျာ၊ သီချင်း စသဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပွင့်အန်ထွက်လာကြတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာတာဟာ အချစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီိ၊ ဖူးစာရှင်ကိုတွေ့ပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေပါပဲ။ တခါတလေ အဲဒီထက်ပိုတဲ့ခံစားချက်တွေတောင်ဖြစ်လာရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့အခုဖော်ပြပေး မယ့်အချက်တွေကို ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာရှင်ကိုတွေ့ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ (၁)တစ်ယောက်တည်းရှိချိန်ဆိုပြုံးမိတယ် စိတ်ထဲမှာ အလိုလိုပျော်နေတဲ့ခံစားချက်က တကယ့်ကို မူးမူးမေ့မေ့ပါပဲ။ သူ့အကြောင်းတွေးလိုက်ရင် သူ့ဆီကမက်ဆေ့ဝင် လာတာ၊ ဖုန်းဆက်လာရင် စိတ်ထဲမှာအလိုလိုပျော်နေတယ်။ သူ့ဆီက ဖုန်းလာတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိမထား မိလောက်အောင် အလိုလိုပျော်နေတာ တခြားသူတွေအမြင်မှာတော့ ကိုယ်ကအထူးအဆန်းသဖွယ် ကြည့်ခံရလောက်တဲ့ အထိပါပဲ။ (၂)ဘယ်တုန်းကမှမလုပ်ဖူးခဲ့တဲ့အရာတွေလုပ်ဖြစ်လာမယ် ဆိုလိုတာကတော့ ကြိုက်မရှက်၊ ငိုက်မရှက်၊ ငတ်မရှက်ဆိုတဲ့ စကားထဲက ကြိုက်မရှက်ဆိုတဲ့အတိုင်း အရင်က ကိုယ်က ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘာသိဘာသာသဘောထားခဲ့သလောက် အခုတော့ သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ၊ သူဝါသနာပါတဲ့အရာ၊သူသွားတတ်တဲ့နေရာလေးတွေကို … Read more
ရုပ်ရှင်ထဲကလို အဆင့်အတန်းချင်းမတူမှ၊ မိဘတွေ သဘောမတူမှ၊ အချစ်ချင်း မညီမှ လူနှစ်ဦး ပေါင်းစည်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့ကြတာပါ။ အမှန်တော့ သာယာတဲ့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ဖို့အတွက် နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှု၊ လေးစားမှု၊ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု၊ ရိုးသားမှုနဲ့ ကတိတွေလည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒါတွေအားလုံးရှိနေရင်တောင် တခါတလေမှာ ဖြေရှင်းရခက်တဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိတတ်ပြန်ပါတယ်။ ၁။ သင့်ကို မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင် သူလုပ်နေတဲ့အချိန် ချစ်တိုင်းလည်း တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ကောင်းကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းလိုအပ်တာက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်သူပါ။ သင့်ကို သူ့လို ဆိုးရွားတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဒေါသကြီးတဲ့ သူတစ်ဦး ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့သူမျိုးနဲ့ အတူမရှိသင့်ပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုး အမြဲဖြစ်နေရင်တော့ သင်ဘယ်တော့မှ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂။ ဒီအချစ်ရေးခိုင်မြဲဖို့ … Read more
သင်က စုံတွဲတစ်တွဲ လိုက်ဖက်မှုရှိမရှိကို ဇာတာတွေ ၊ဗေဒင်တွေနဲ့ တွက်ချက်ပြီး ကြည့်ရတာကို မယုံကြည်တတ်တဲ့ လက်တွေ့သမားတစ်ယောက်ဆိုရင် အခုဖော်ပြမယ့်အချက်တွေကို ကြည့်ပြီး သင်တို့စုံတွဲက လိုက်ဖက်ညီတဲ့ စုံတွဲ ဟုတ်မဟုတ် အဖြေထုတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကြာအောင် တွဲလာတဲ့ စုံတွဲဖြစ်ပါစေ လိုက်ဖက်ညီမှုမရှိရင် ပျော်ရွှင်မှုထက် စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကိုပဲ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သင်တို့နှစ်ယောက်တွဲနေတာကို မထောက်ခံကြပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ ပုံစံတူ အကြိုက်တူတဲ့ သူငယ်ချင်းအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ အတူရှိပေးဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်တဲ့ သင့်အဖော်က သင့်အတွက်လည်း လိုက်ဖက်တဲ့ လက်တွဲဖော်ကောင်းတစ်ယောက် အဖြစ်အမြဲရှိနေဖို့ ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ယောက်တွဲပြီးနောက်ပိုင်း မိတ်ဆွေသစ်ထပ်မရဘူးဆိုတာကလည်း ပျော်ရွှင်တဲ့ စုံတွဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြပါတယ်။ ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ချစ်သူတွေက အတူတူ့ ဖြတ်သန်းချင်တဲ့ အချိန်တွေ၊ အကြောင်းအရာတွေများသလို ပွဲလမ်းသဘင်တွေ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတာတွေအပြင် နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ … Read more
ရည်းစားနဲ့ လမ်းခွဲပြီးသွားပေမယ့် သူ့ကိုပဲ လွမ်းဆွတ်တမ်းတနေမိပါသလား၊ သူဟာ သင့်နှလုံးသားရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖဲ့ခြွေယူဆောင်သွားသလို သင်ခံစားနေရပါသလား။ သူကိုယ့်ဘေးမှာ မရှိတော့တဲ့ လျစ်ဟာမှုကြောင့် သင်နာကျင်နေရတာဟာ ခုပြောပြပေးမယ့် အဓိက အကြောင်းအရင်း (၅) ချက်ကြောင့်ပါပဲ။ ၁။သင်သူ့ကို ပုံအပ်ပြီး တွယ်တာမိလိုက်လို့ပါ။ တစ်ခြားသူတွေလို မဟုတ်ပဲ အရမ်းယုံကြည်ပြီး ချစ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် လမ်းခွဲတဲ့အခါ အရမ်းခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ၂။သူဟာ သင့်ဘ၀ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ အမြဲပါဝင်နေခဲ့တာကြောင့်ပါ။ မနက်မိုးလင်းတဲ့အချိန်ကစပြီး နှစ်ယောက် message လေးတွေပို့၊ နှစ်ယောက်သား မနက်စာ အတူစားဖြစ်တာ၊ အလုပ်အတူသွားတာမျိုး၊ ချစ်သူက အလုပ်လာကြိုတာမျိုး၊ စနေ တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက်တွေ အတူကုန်ဆုံးတတ်တယ် ဆိုရင်တော့ အခြားသူတွေထက် ပိုပြီး သူ့ကို မေ့ဖျောက်ဖို့ ခက်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ၃။သူနဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ ရှိတယ်လို့ … Read more